Inowanikwa iyo nyowani vhezheni yeAlpine Linux 3.8.1 | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rapera iyo vhezheni nyowani yekuparadzirwa kweLinux Alpine Linux yakaburitswa kuuya kune yayo nyowani vhezheni 3.8.1 iyo iyo inowedzera mitsva maficha kune iyo system uye pamusoro pazvo zvese zvinouya nekugadzirisa bug uye kugadzirisa kwepakeji.
Alpine Linux iri nharaunda-yakavandudzwa sisitimu inoshanda yakagadzirirwa x86 ma routers, firewalls, chaiwo akasarudzika maneti, IP mafoni, uye maseva.
Is yakagadzirirwa kuisa pfungwa yekuchengetedza, iyo inosanganisira akati wandei anoshanda ekuchengetedza maficha senge PaX uye SSP, izvo zvinogona kudzivirira kusagadzikana kwesoftware kuti isashandiswe nevanokwikwidza.
Iyo system inoshandisa raibhurari yemitauro yeC musl, zvishandiso zvekutanga zviri muBusyBox. Izvo zvakajairika pane zvakadzamidzirwa masisitimu uye zvidiki pane zvishandiso pane GNU / Linux masystem.
Alpine Linux yakavakirwa musl libc uye busybox. Izvi zvinoita kuti zvidiki uye zviwedzere kushanda pane zvakajairwa GNU / Linux kugoverwa.
Mudziyo haudi zvinopfuura masere masere uye kuisirwa padiki dhisiki kunoda kusvika 8MB yekuchengetedza.
Iwe haungowana chete zvizere zvakazara nharaunda yeLinux asi yakakura sarudzo yemapakeji kubva kune repository.
1 Nezve kugovera
2 Kusunungurwa kutsva kubva kuAlpine
3 Alpine Linux Dhawunirodha
Iwo mapakeji emabhinari akadzikiswa pasi uye akatsemurwa, zvichikupa iwe kunyanya kutonga pane izvo zvaunoisa, izvo zvinobva zvachengetedza nharaunda yako kunge diki uye inoshanda sezvinobvira.
Alpine Linux iko kugovera kuri nyore kwazvo iko kunoshandisa kwayo pacheji maneja kunodaidzwa kuti apk, iyo OpenRC boot system, masisitimu-anotungamirwa masisitimu, uye zvimwe.
Ichi inokupa iri nyore uye yakajeka Linux nharaunda nazvo unogona kuwedzera mapakeji aunoda eprojekti yako.
Saka kunyangwe iwe uri kuvaka imba PVR kana iSCSI yekuchengetedza controller, yekupedzisira-yakatetepa mail server mudziyo, kana dombo-rakasimba rakabatanidzwa switch, hapana chimwe chinopinda munzira.
Iyo kernel inonongedzwa neisina kukodzera chiteshi kubva mukuchengetedza / PaX, uye ese emushandisi mabhinari akaunganidzwa sechigaro chakazvimirira chinogoneka (maPIE) ane stack kupwanya dziviriro.
Iyo purojekiti inogoverwa muzvikamu zvakawanda, imwe neimwe ine chinangwa chayo uye kugona kwayo. Iyo hombe edition inonzi Alpine Linux Standard, inosanganisira mamwe mapakeji anonyanya kushandiswa, uye yakanangana nemaseva nema routers anomhanya akananga kubva ku RAM (system memory).
Yechipiri edition inodaidzwa kuti Alpine Linux Mini uye iri chaizvo ishoma vhezheni yeAlpine Linux Standard. Iyo inouya pamwe chete mashoma mashoma mapakeji uye inogona kuve yekuisa iyo yekushandisa system kubva kunetiweki.
Chinyorwa chechitatu chinonzi Alpine Linux VServer uye inosanganisira chete iyo Vserver inomiririra mapakeji. Vashandi veNetwork vanogona kushandisa iyi Alpine flavour kushandisa VServer mauto anomhanya akananga kubva ku RAM.
Uyewo inogona kuiswa pane yemunharaunda disk drive. Chekupedzisira, iyo Alpine Linux Xen edition inopa vashandisi neXen Dom0 Live CD uye Xen mapakeji. Iyo inongotsigirwa chete pa64-bit Hardware mapuratifomu.
Kusunungurwa kutsva kubva kuAlpine
Uyu Iyo bugfix vhezheni yeyakagadzikana bazi v3.8, Yakavakirwa paLinux kernel-4.14.69 uye iine bug fixes.
Iine yakakosha yekuchengetedza yekuvandudza ye apk-maturusi ayo anogadzirisa inogona kuitika kure kuvhura. CVE yakamirira.
Pamusoro pazvo akati wandei emapakeji akasanganisirwa mukati mekugovera uku akagashira ekuchengetedzeka, yatinogona kuratidza php7 kusvika 7.2.8, php5 kusvika 5.6.37, Nextcloud kugadzirisa kune yayo nyowani vhezheni 13.0.6.
Pamusoro peizvi, wpa_supplicant akagamuchira chengetedzo gadziriso (CVE-2018-14526), ​​pamwe ne py-django (CVE-2018-14574) uye openssh (CVE-2018-15473).
Alpine Linux Dhawunirodha
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Alpine Linux 3.8.1 shanduro nyowani inowanikwa